Ukubaluleka kwesiCwangciso seNtengiso seVidiyo: Izibalo kunye neeNgcebiso | Martech Zone
Sabelane nje nge-infographic ngokubaluleka kwe- ukuthengisa okubonakalayo -Kwaye, ewe, ibandakanya ividiyo. Besisenza itoni yevidiyo kubaxhasi bethu kutsha nje kwaye iyonyusa ukubandakanyeka kunye namaxabiso okuguqula. Zininzi iintlobo ze ezirekhodiweyo, iividiyo ezivelisiweyo ungenza… kwaye ungalibali ividiyo yexesha lokwenyani kuFacebook, ividiyo yentlalo kwi-Instagram nakwiSpapchat, kunye nodliwanondlebe lukaSkype. Abantu batya izixa zevidiyo.
Kutheni ufuna iSicwangciso seNtengiso seVidiyo
I-YouTube iyaqhubeka nokuba yiyo # 2 iwebhusayithi ekhangelwe kakhulu ngaphandle kukaGoogle. Abathengi bakho bafuna iqonga lezisombululo… umbuzo ngowokuba ukhona okanye awukho.
Ividiyo inokunceda lula Inkqubo entsonkothileyo okanye umba onokufuna okubhaliweyo kunye nomfanekiso-ngqondweni ukufumana ukuqonda. Iividiyo ezichazayo ziyaqhubeka ukuqhuba ukuguqulwa kweenkampani.
Ividiyo inika ithuba ngakumbi izivamvo… Ukubona nokuva kunyusa umyalezo kunye nendlela umbonisi wakho awuqonda ngayo.
Ukuqhuba kweevidiyo amaxabiso aphezulu okucofa kwiintengiso, iziphumo zeinjini yokukhangela, kunye nohlaziyo lwamajelo asekuhlaleni.
Abantu kubunkokeli bokucinga kunye nobungqina bamakhasimende babonelela ngakumbi obusondeleyo amava apho uburharha, umtsalane, kunye nokuthembana kunokunxibelelana ngcono kumbukeli.
Ividiyo inokuba ngaphezulu nwabisa kunye nokuzibandakanya kunokubhaliweyo.
Izibalo zeNtengiso yeVidiyo
Abantu abazizigidi ezingama-75 eMelika babukela iividiyo ezikwi-Intanethi mihla le
Ababukeli bagcina iipesenti ezingama-95 zomyalezo xa ukwividiyo xa kuthelekiswa ne-10% xa ufunda isicatshulwa
Ividiyo yentlalo ivelisa i-1200% ngaphezulu kwezabelo kunokubhaliweyo kunye nemifanekiso edibeneyo
Iividiyo kumaphepha e-Facebook zonyusa ukubandakanyeka komsebenzisi nge-33%
Ukukhankanya igama levidiyo kwilayini yesifundo se-imeyile kunyusa izinga lokucofa nge-13%
Ividiyo iqhuba nge-157% yokunyuka kwetrafikhi yendalo evela kwiPhepha leZiphumo zeNjini
Iividiyo ezifakwe kwiiwebhusayithi zinokunyusa ukugcwala kwabantu ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-55
Abathengisi abasebenzisa ividiyo bakhulisa ingeniso ngama-49% ngokukhawuleza kunabasebenzisi abangasebenzisi vidiyo
Iividiyo zinokunyusa ukuguqulwa kwephepha lokufika ngama-80% okanye nangaphezulu
I-76% yeengcali zentengiso ziceba ukusebenzisa ividiyo ukwandisa ulwazi lweshishini
Njengaso nasiphi na esinye isicwangciso somxholo, sebenzisa ividiyo kwinzuzo yayo ephezulu. Abarhwebi akufuneki babe nekhulu leevidiyo phaya… nokuba kukujonga nje ubunkokheli kwinkampani, ividiyo echazayo echaza into enzima, okanye ubungqina bomthengi bunokuba nefuthe elimangalisayo kwizicwangciso zakho zentengiso yedijithali.
Inye kuphela into endiyithathayo kule infographic kukuba ukujongwa kwabantu kuye kwaba ngaphantsi kwentlanzi yegolide. Akunjalo. Ndijongile nje-ndibukele ixesha elipheleleyo lenkqubo kwimpelaveki… akukho ngxaki ekuqwalaseleni ixesha! Into eyenzekileyo kukuba abathengi bayaqonda ukuba banevidiyo ukhetho, ke ukuba awubambi ingqalelo yabo kwaye uyigcine kwividiyo yakho, baya kuhamba kwenye indawo ngemizuzwana.
Nantsi infographic, Ukubaluleka kweNtengiso yeVidiyo, ukusuka kwi-IMPACT.
tags: ividiyo yebhlogividiyo yokufika kwiphephaIiVidiyo zeNtengisoImveliso ecacisa ividiyoividiyo yemidiya yoluntuividiyo yentlalosyndacastchwetheza ividiyoukuthengisa ividiyoividiyo seoIindidi zevidiyoIvidiyo yewebhuamaqhawe ewebhusayithi